Alaab-qeybiyeyaasha Farmashiyaha, Soosaarayaasha Waxsoosaarka Dawooyinka ee Firfircoon - Iibso API- Medicinerawmaterials.com
Dhagax cagaaran > Products > Waxyaabaha ay ka kooban tahay dawooyinka
Our maaddooyinka daawooyinka, daawada alaabta ceyriinka ah ee loo isticmaalo soo saarida diyaargarowga kaladuwan, waa qeyb firfircoon oo ka mid ah diyaarinta. Waxaa loo isticmaalaa sida budo dawo ah, madarad, soosaarid, iwm, oo lagu diyaariyo iskudhis kiimikaad, soo saarista dhirta ama bayoolajiyada.
Kaliya awoodo API lagaa baaraandegaa diyaarinta daawada waxay daawo u noqon doontaa arjiga daaweynta.
All maaddooyinka dawooyinka firfircoon annaga waa in si adag loo baaro HPLC, GC ama UV ， hubinta daahirsanaanta wanaagsan. Daawooyinka, nafaqada, iyo waxyaabaha la isku qurxiyo ee lagu farsameeyo walxahayada dawooyinka waa kuwo tayo leh oo lagu kalsoonaan karo.
Liiska Waxyaabaha Ay Ka Kooban Tahay Dawooyinka
Marka loo eego isha laga helayo alaabta ceyriin ee dawada, waxaan u kala qaadaynaa laba qaybood oo waaweyn: Daawooyinka synthetic kiimikada iyo dawooyinka kiimikada dabiiciga ah.
Daawooyinka synthetic kiimikada waxaa loo sii qeybin karaa daawooyinka isku-dhafan ee aan dabiici ahayn iyo daawooyinka dabiiciga ah ee dabiiciga ah. Daawooyinka isku-dhafan ee aan dabiici ahayn waa iskudhisyo aan dabiici ahayn (xubno aad u tiro yar), sida aluminium hydroxide iyo magnesium trisilicate loogu talagalay daaweynta boogaha iyo caloosha; daawooyinka synthetic ee dabiiciga ah waxaa laga helaa walxaha kiimikada aasaasiga ah ee dabiiciga ah kuwaas oo lagu diyaariyo taxane ah falgallo kiimikaad dabiici ah (sida aspirin, chloramphenicol, kafeyn, iwm.).
Daawooyinka kiimikada dabiiciga ah waxaa loo qaybin karaa daawooyinka biochemical iyo phytochemical drugs sida laga soo xigtay ilaha ay ka heleen. Antibiyootigyada guud ahaan waxaa soo saara halsano jeermis yar yar waxayna ka tirsan tahay qaybta biochemistry.